Ndị uwe ojii Isi na Nzuzo - OMG Solutions
Kaadị akara igwefoto a na-ahụkarị na The Leadership Conference on Civil and Human Rights, na-arụ ọrụ na ihe ọhụrụ na ịgakwuru ụlọ ọrụ ndụmọdụ Upturn, nyochara ụlọ ọrụ ndị uwe ojii 50 US wee kwupụta na ha na-arịa ọrịa n'ọtụtụ akụkụ nke nyocha asatọ. Ihe ngosi ndị a jikọtara otú ndị uwe ojii si echebe nchebe nke ndị ha dekọtara, n'agbanyeghị ma enyere ndị ọrụ ikike inyocha ihe nkiri tupu ha edee akụkọ ha, ruo ókè a na-edekọ ya na ma ndị na-agụ akwụkwọ mgbe niile nwere ike ịhụ ihe nkiri ha gosipụtara. Di iche iche ndi otu ndi otu ndi mmadu, ndi na-akwalite nchebe na isi okwu banyere ihe omuma na May 2015 iji metuta otu ulo oru na-eme ma jiri ihe ohuru a.
Onweghi nkewa nke a nwetara akara ugo mmụta na klaasị niile. Eziokwu ka a gwara naanị 13 gafere marshal n'ọtụtụ mpaghara, dịka Wade Henderson, onye isi ala na onye isi oche nke Nzukọ Ndị Isi, nzukọ nchedo nnwere onwe nke ọha na-achịkọta na 1950 iji gwa ndị otu dị iche iche gụnyere NAACP na ACLU. Officeslọ ọrụ ndị uwe ojii na Ferguson, Mo., na Fresno, Calif., Leghaara imezu njirisi ọ bụla anya. Ferguson lebara anya na ụwa afọ abụọ gara aga mgbe ndị uwe ojii jiri ogbugbu gbuo nwa okorobịa Amerịka na mba Amerịka bụ Michael Brown, na-eme ka mba ahụ dum rụọ ụka maka etu ikike iwu si emeso ndị pere mpe.
Nchegbu Banyere Jiri Ahụ Arụ Ọrụ Ahụ:
Ndị otu na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ na-atụkwa ụjọ na enwere ike iji mmemme nke biometric nwere ike ihu ihu iji mata ndị mmadụ n'otu n'otu ihe nkiri igwefoto, yana akara ngosi akara asatọ nke akara ngalaba ahụ na-abịakwute dabere ma ha na-akpọ maka ịgbasa isi na biometrics were. Ihe ọhụụ a na-atụ anya ka ndị mmadụ hụ ozugbo na igwefoto chọrọ ngwakọta nke njikwa njikwa, ngụkọta oge na batrị igwefoto nke na-adịbeghị-agbanyeghị nke nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa dịka Taser International na ndị ọzọ na - emepụta igwefoto na - eto ikike ịwụfu ndụ. Kedu ihe ọzọ, nkwenye ihu nke iwepụ foto dị ka nke dị ugbu a.
Groupstù ndị na-ahụ maka ihe ndị ruuru mmadụ na-atụ ndị uwe ojii ụjọ ga-eji igwefoto dị ka ihe nhichapụ nyocha mgbe ha na-ekiri agbata obi pere mpe, Henderson kwuru na mkparịta ụka ọha na eze. Ọfịs ole na ole emeghachila omume banyere nchegbu ndị a site n'ịmanye ụkpụrụ nduzi iji gbochie ịkwafu ihu ọhụrụ na-agbanwe ọhụụ tupu ya enwee ike ịnweta ya. Ngalaba ndị uwe ojii Baltimore bụ naanị otu n'ime afọ gara aga akara mbu nke Leadership Conference nke atụmatụ ya dị ka nke ugbu a na-akpali nyocha ihe omimi nke ihe nkiri. Ihe nchoputa nke nzuko nke nzuko a gosiputara na ndi uwe ojii na Baltimore County, Boston, Cincinnati, Montgomery County, Md. Na Parker, Colo., Nwere ihe omuma ndi ozo.
"Ojiji nke biometrics ga-abụ isi okwu-ọ bụghị na oke ọdịnihu," ka James Coldren, na-ahụ maka ndị isi maka mmemme nhatanha na CNA Institute for Public Research, na-ekwu, nchọpụta na-abụghị maka uru na mkpakọrịta nyocha. “Ọ dị ka ihe ọ bụla ọzọ. Biometrics nwere ike ịkpata nsogbu ma ọ bụrụ na anaghị achịkwa ya ma ọ bụ na-enyocha ya ma ndị nwere ebumnuche dị egwu jiri ya n'ụzọ ahụ. Coldren na William Sousa, onye isi nke Center for Crime and Justice Policy na Mahadum nke Nevada, Las Vegas, na-anya nyocha nke ihe omume igwefoto Las Vegas Metropolitan Police Department na-agba ọsọ. Ha na ndi nkuzi Leadership enweghi ihe ha na achoputa ma ha achoputaghi site na nchoputa ha na, mgbe ufodu ihe mgbochi na-adighi nma, ulo oru ndi uwe ojii na-akpọ ndi mmadu ese foto. Coldren na-ekwu, "[Na Las Vegas] nkewa ahụ chọpụtara na ihe ndekọ ndị ahụ bara uru maka ndị na-akwụwa aka ọtọ na ndị jọgburu onwe ha.
Na agbanyeghị ihe dị na mbara igwe, nsogbu dị iche iche na-emetụ n'ahụ karịa biometrics, kwuru Michael White, onye nkuzi nke mpụ na Mahadum Ọchịchị Arizona bụ onye nyochara kamera ndị eyiri eyi maka US Branch of Justice (DoJ). Anụla m ụfọdụ mkparịta ụka banyere ikike [ojiji nke biometrics] mana amaghị m gbasara otu ọ bụla na-aga n'ihu n'ụzọ ahụ ọsọ ọsọ ugbu a. ” N'ime njirisi nke Nzukọ Ọchịchị na-adị gburugburu, nke kachasị na-agụnye mgbe ndị isi na-edekọ na otu ha si echekwa nchekwa nke ndị isi-ọkachasị nke ajọ omume na-erigbu ndị mmadụ. Dị nche dị otu a apụtala dịka ụfọdụ ụlọọrụ na-eme ọwa YouTube maka ndekọ ha.
Nchegbu Banyere thetụ Ego Maka kamera:
Ọtụtụ nkewa na-ezo aka na ọnụ ahịa dị ka ihe mgbochi iji mepụta ihe ọhụụ. Igwefoto onwe ha nwere ike ịgbatị ụgwọ site na $ 300 ruo $ 800 kwa onye isi, yana ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke dollar na-aga n'ihu na-eji ọnwa na ọnwa na-echekwa vidiyo mgbe oge ụfọdụ gasịrị. Mmefu ahụ bụ ihe ọ bụla siri ike ịchọpụta: akụrụngwa, ịkwadebe na ịkwakọba ozi. Dịka ọmụmaatụ, ego itinye ego na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-enweghị mmekọrịta mmekọrịta na-enweghị isi, ka ọ bụrụ na ọ nwere ike, ọ bụghị ihe niile dị mfe ịtụle, kwuru White, ngalaba-otu ndị otu na-azụ ma na-enyere aka na ngalaba ikike ikike nke ndị ọrụ igwefoto na-arụ ọrụ. ndị Doj's Bureau of Justice Assistance (BJA) na-akwado. Agbanyeghị, White na-eche ma eleghị anya akụkụ nke ụgwọ ga-agbagha. “Enfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na-akwụkarị $ 10 ma ọ dịkarịa ala nde mmadụ kwa afọ na ikpe nkịtị,” ka ọ na-ekwu. "Ọ bụrụ na igwefoto ndị ahụ eyighị eyi ga-ebelata ọnụ ọgụgụ ahụ, nke ahụ bụ ezigbo mma."
Nzuzo 5638 2 Echiche Taa